XOG CUSUB: Muxuu uga qaalisan yahay Xajka Soomaaliya laga aado, kan dalalka Geeska Afrika? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG CUSUB: Muxuu uga qaalisan yahay Xajka Soomaaliya laga aado, kan dalalka...
XOG CUSUB: Muxuu uga qaalisan yahay Xajka Soomaaliya laga aado, kan dalalka Geeska Afrika?
Muqdisho (Halqaran.com) – Ayadoo gudashada waajibaadka Xajka ay bilaaban doonaan bisha dambe ee August ayaa Xujayda Soomaalida ee Soomaaliya xajka ka aada waxay ka cabanayaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ku qabaan safarka ay ku tagaan Xajka.
Jabuuti: Xujayda reer Jabuuti ayaa xajka ku taga lacag gaaraysa 2,500 oo dollar oo ay ku jiraan waxyaabaha uu xaajigu u baahan yahay inta uu gudanayo acmaasha xajka, sida cuntadiisa, halka uu dagi lahaa iyo neefkii uu qali laha, sida uu BBC-da u sheegay Madaxa arrimaha xajka u qaabilsan Jabuuti.
Itoobiya:dadka Xajka ka aada dalka Itoobiya oo Soomaalidu ay ku jirto ayaa waxaa laga qaadaa lacag gaaraysa 3,500 oo doollar, waxayna lacagtaas ku baxdaa arrimaha socdaalka, hoteellada iyo gadiidka halka aanay ku jirin cuntada qofka xaajiga ah.
Soomaaliya:Dawladda Soomaaliya ayaa qiimaha lagu tago Xajka u jaan goysay in uu noqdo 3,300 oo dollar kadib markii ay cabasho katimid xujayda oo sheegay in laga qaado lacago xad dhaaf ah, hase ahaatee qaar kamid ah culimada oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in wali qiimuhu uu aad u badan yahay sharikadaha qaarna ay qaadaan lacago intaas aad uga badan oo gaaraya 4,000 oo dollar.
dalalka geeska Afrika
gudashada Acmaasha Xajka